भरतपुर महानगरको अढाइ वर्षको समीक्षा : आधा काम पूरा, केही छन् अधूरा – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
भरतपुर महानगरको अढाइ वर्षको समीक्षा : आधा काम पूरा, केही छन् अधूरा
२०७६ पुष १३, आईतवार ०८:५५ गते
भरतपुर । भरतपुर महानगरमा जनप्रतिनिधिहरु आएका अढाइ वर्ष पूरा भएको छ । २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि पाएको भरतपुर महानगरले यो अढाइ वर्षमा धेरै विकासका कामहरु भएको दाबी गरेको छ ।
महानगरलाई झट्ट हेर्दा देखिने काम भनेको सडकको कालोपत्रे नै हो । सुधार हुन नसकेको काम भने फोहोर व्यवस्थापन नै हो । भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले पद बहालीकै पहिलो दिन भरतपुर अस्पतालमा महिलालाई ओपीडी टिकट निःशुल्क गरेकी थिइन् । नगरवासीलाई लागेको थियो, ‘अब भरतपुर महानगरको विकासले काँचुली फेर्नेछ ।’
तर, सोचेजस्तो जीवन हुन्न भनेझैँ नगरको विकास पनि सोचेजसरी अगाडि लम्कन सकेन । तर पनि देशभरका पाँच महानगरभित्र भइरहेका विकासको कामको तुलनामा यो अढाइ वर्षमा भरतपुरको विकास पनि कम छैन । भरतपुर महानगरमा अढाइ वर्षमा आएका आयोजनाहरु ठूला छन्, तर सम्पन्न गर्न ठूलै पापड बेल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । महानगर ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न लागिपरेको छ ।
अढाइ वर्षका देखिने काम
अढाइ वर्षमा कुनै पनि ठूला आयोजनाहरु पूरा भएका छैनन्, तर केही कामहरु सम्पन्न भएका छन् । ‘अढाइ वर्षमै ठूला गौरवका आयोजनाहरु पूरा हुन सक्दैनन्, तर ठूला आयोजनाहरु तीव्रताका साथ निर्माणको काममा अघि बढिरहेका छन्’ महानगर प्रमुख रेनु दाहालले भनिन्, ‘अढाइ वर्षमा सबैभन्दा धेरै काम भएको सडक कालोपत्रे नै हो, एक दर्जनभन्दा ठूला आयोजनाहरु धमाधम निर्माण भइरहेका छन् ।’
अढाइ वर्षमा देखिने प्रमुख काम भनेको भरतपुर महानगर पहिलो सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर घोषणा हुनु हो । यतिबेला सडकमा बेवारिसे मानव देखिएका छैनन् । ‘रातिराति म आफैँ सडकमा पुगेर बेवारिसे मानवहरुको व्यवस्थापन गरेर भरतपुर महानगर पहिलो सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर घोषणा गरियो’ प्रमुख दाहालले भनिन्, ‘देखिने काम सम्पन्न भइसकेका थुप्रै छन्, वडाका भवनहरु बनेका छन्, रिंगरोड र लिंकरोडका काम धमाधम अघि बढेको छ ।’
अर्को महानगरको देखिने काम भनेको महानगरीय फलफूल तथा तरकारी बजार हो । लायन्सचोकको फलफूल बजारलाई क्षेत्रपुरमा सारेर महानगरीय फलफूल तथा तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याउनु अर्को देखिने काम हो । यसमा प्रदेश सरकारले अहिले विषादी प्रयोगशाला राखेर झन् सुनमा सुगन्ध छरेको छ ।
स्मार्ट सिटीमा फेल : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस चितवनले भरतपुर महानगर स्मार्ट सिटी बनाउन फेल भएको दाबी गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सचिव उत्तम जोशीले महानगरले स्मार्ट सिटी बन्नको लागि चाहिने सूचांकहरु एउटा पनि पूरा नभएको बताए ।
उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि आउनसाथ स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर जुन चर्चा गरियो, त्यो अनुसार एउटा पनि काम हुन सकेको छैन ।’ सचिव जोशीले भरतपुर महानगरको अढाइ वर्षको अवधिमा हिजोको अवस्था जस्तो थियो, आजको अवस्था त्यस्तै रहेको बताए ।
उनका अनुसार सबै परिकल्पनामात्र भए, सपनामात्र बाँडियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सचिव जोशीले भने, ‘सिटी हल बनाउने भनिएको डेढ वर्ष भइसकेको छ, तर डीपीआर पनि बनेको छैन ।’ बजारको व्यवस्थापन महानगरले गर्न नसकेको सचिव जोशी बताउँछन् । उनले भरतपुर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल बनाइयो तर कुनै सुविधाहरु नथपिएको बताए ।
‘भरतपुर विमानस्थल विस्तार भनियो, कुनै काम भएको छैन, क्रिकेट रंगशाला निर्माणको क्रममा छ, तर त्यहाँका स्थानीयको समस्या समाधान भएको छैन’ उनले भने, ‘करको आतङ्क छ, दुई हजार प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाएर के गर्न खोजिएको हो ? स्मार्ट सिटी भयो त महानगर ?
उनले भरतपुर महानगरमा एउटा पार्क पनि निर्माण पूरा नभएको बताए । ‘खेलकुद मैदानसमेत बन्न सकेको छैन, कामको घोषणा त धेरै भए तर कार्यान्वयन छैन, अढाइ वर्ष ख्यालख्यालमै बित्यो ।’
अर्को महानगरको देखिने काम भनेको गाउँगाउँका सडकहरु कालोपत्रे बन्नु पनि हो । जनप्रतिनिधि आउनुअघि भरतपुर २४ नं वडामा कालोपत्रे सडक नै थिएन तर अहिले त्यो वडामा कालोपत्रे नभएको सडक भेट्टाउन मुस्किल पर्छ । ग्रामीण सडकहरु पनि धमाधम कालोपत्रे भएका छन् । चौबीसकोठी–चनौली सडक एक दशकसम्म नै बनेन, तर अहिले चौडासहितको कालोपत्रे छ ।
‘यो अढाइ वर्षमा झन्डै २०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे बनेका छन्’ महानगर प्रमुख दाहालले भनिन्, ‘कति सडकहरुमा मोज्याक टाइल पनि बिछ्याइएको छ, अबको अढाइ वर्षमा महानगरका सबै मुख्य तथा शाखा सडकलाई कालोपत्रे बनाउने हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ, त्योअनुसार कामहरु अगाडि बढेको छ’
महानगरको अर्को देखिने काम भनेको नारायणगढ बजारको फुटपाथ व्यवस्थापन हो । फुटपाथमा नाङ्लो पसल राख्दा पैदल यात्रुहरुले धेरै सकस भोगेका थिए । फुटपाथमा बस्नेहरुलाई छुट्टै ठाउँको व्यवस्थापन गरेर महानगरले यो अढाइ वर्षमा अर्को देखिने काम गरेको हो ।
अर्को देखिने काम भनेको तीन पांग्रे (अटो रिक्सा) लाई मुख्य राजमार्गमा रोक्ने काम हो । राजमार्गमा अटो रिक्सा चल्दा धेरै दुर्घटनाहरु भएका थिए । राजमार्गमा अटो रिक्सा चल्न रोक लगाएर महानगरले दुर्घटना न्यूनीकरणमा भूमिका खेलेको थियो । लामो समय चलेको आन्दोलन र यसलाई संवादबाट हल गरेर महानगरले राजमार्गमा अटो रिक्सा चल्न रोक लगाएको थियो ।
महानगरका जनप्रतिनिधि आउनासाथ भरतपुर र नारायणगढका मुख्य राजमार्गमा हर्न निषेधको काम पनि गरिएको थियो, तर अहिले पछिल्लो समय बढी उल्लंघन भएको पाइएको छ ।
सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न २० स्थानमा व्यवस्थित ट्राफिक आइल्यान्ड राख्न, भरतपुर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल बनाउन, क्यान्सर अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न, लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठाउन, खानेपानीको विस्तार गर्न, १८ वटा वडाहरुमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउन, प्रविधिमैत्री वडा कार्यालय बनाउन, कृषिको मल, बीउ, दूधमा अनुदान दिन महानगर अढाइ वर्षमा सफल भएको छ ।
यस्तै, अढाइ वर्षमा शिक्षातर्फ रामपुरमा इन्जिनियरिङ क्याम्पस सञ्चालनमा ल्याइन, भरतपुर १४ मा प्रहरी विद्यालय खोल्न महानगर सफल भएको छ । पर्यटनतर्फ पटिहानीलाई देशकै एक सय गन्तव्यभित्र पार्न र मेघौलीलाई प्रदेशको एक नं गन्तव्यमा ल्याउन पनि महानगर सफल भएको छ ।
केके काम निर्माणमा छन् ?
भरतपुर महानगरका ठूला आयोजनाहरु यतिबेला निर्माणको क्रममा छन् । ‘गौरवका ठूला आयोजनाहरु अढाइ वर्षको अवधिमा पूरा हुन सक्दैनन, धेरै निर्माणको चरणमा छन्, केही अन्तिम चरणमा पुगेको छ’ महानगरका प्रमुख रेनु दाहालले भनिन् । उनका अनुसार भरतपुर अस्पतालको कुरूवाघरको यतिबेला ८० प्रतिशत काम पूरा भएको छ ।
महानगरको अर्को गौरवको आयोजना देवघाटमा बन्दै गरेको विद्युतीय शवदाह गृह पनि हो । यो निर्माणको क्रममा छ, तर निर्माणको गति अलि बढी सुस्त भएकाले समयमै सक्न महानगर प्रमुख दाहालले निर्देशन दिएकी छन् । केही दिनअघि महानगर प्रमुख दाहालले ठूला आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन गरी सबै काम समयमै सक्न निर्देशन दिएकी थिइन् । समयमै काम गर्न नसक्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनले बताएकी छन् ।
भरतपुर १९ को रानीपोखरी ताल तथा पार्क निर्माण, भरतपुर २७ मा मुसहर बस्ती निर्माण, भरतपुर २२ मा अम्ब्रेला पार्क, भरतपुर २४ मा आयुर्वैदिक अस्पताल, भरतपुर ६ को लक्ष्मीनारायण मन्दिर र पार्क निर्माण महानगरको लिंकरोड, रिङरोडलगायतका ठूला आयोजनाहरु निर्माणले गति लिएको छ । यसबाहेक अर्को ठूलो गौरवको आयोजना गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला पनि धमाधम निर्माणको क्रममा छ ।
यस्तै, राप्ती र नारायणी तटबन्धको काम पनि निर्माणको गतिमा नै छ । भरतपुरको चार लेनको बाइपास सडक पनि यतिबेला निर्माणको क्रममा रहेको छ । ‘काम नभएका होइनन्, अढाइ वर्षमा कुनै महानगरले नगरेको काम भरतपुर महानगरमा भएका छन्’ प्रमुख दाहालले भनिन् ।
केके छन् प्राथमिक चरणमा
भरतपुर महानगरका केही काम प्राथमिक चरणमा नै रहेका छन् । महानगरका प्रवक्ता अरूण पीडित भण्डारीका अनुसार नारायणगढको पुरानो सव्जीमण्डीमा १३ तले बहुउद्देश्यीय भवन डीपीआर भइसकेको छ । उनले भने, ‘टेण्डरको प्रक्रियामा जान बाँकी छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र नक्सा पास पनि सकिएको छ ।’
जिल्ला समन्वय समितिको पछाडि बन्ने भनिएको सिटीहलको डीपीआर सकिएको छ । प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘चार बिघा आठ कठ्ठा जग्गामा सिटी हल बन्दै छ ।’ यसको पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकिएको महानगरले जनाएको छ । फागुनभित्र टेन्डर निकालिने उनी बताउँछन् ।
ल्याण्डफिल साइटको लागि कोरियन कम्पनी सुधोकनसँग एमओई सम्पन्न भइसकेको छ । जलदेवी सामुदायिक वनमा ल्याण्डफिल साइट बन्ने प्रवक्ता भण्डारी बताउँछन् ।
दुई काम अध्ययनमात्र
महानगरले यसअघि भनेका दुई ठूला काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । पुल्चोकदेखि गोन्द्राङसम्मको छ लेन बनाउने भनिए पनि यसको कुनै काम अघि बढेको छैन । अध्ययनमात्र भइरहेको भनिएको छ, तर यो कामको हालसम्म केही प्रगति देखिएको छैन । महानगर भने डीपीआरको काम भइरहेको दाबी गरेको छ ।
अर्को काम भरतपुर विमानस्थल विस्तारको काम । यो पनि अध्ययन टोलीले अध्ययन गरिरहेको भनिएको छ । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई भरतपुर आएर सर्वदलीय छलफल गरी भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गर्ने बताएका थिए । केन्द्रबाट एक अध्ययन टोलीले भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गर्न अध्ययन गरिसकेको छ ।
के के गर्न सकिएन ?
भरतपुर महानगर स्वयम्ले केही कामहरु गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । प्रवक्ता भण्डारीले भरतपुर महानगरलाई सफा नगर बनाउन अझै नसकिएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘हामीले नसकेको फोहोरमैला व्यवस्थापन हो, कोरियन कम्पनीले फोहोरमैला व्यवस्थापनको गुरूयोजना बनाइरहेको छ, आशा गरौँ, सुधार होला ।’
यस्तै, स्मार्ट सिटी बनाउने बन्ने प्रतिबद्धतामा केही ठेसहरु लाग्दा यसको सपनालाई साकार पार्न अझै नसकिएको प्रवक्ता भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार अर्को काम बजारमा ढलको निकास राम्रोसँग गर्न अझै सकिएको छैन । ‘अढाइ वर्ष त सकियो, आधा काम त पूरा भएका छन् अब अढाइ वर्षमा अपूरा कामहरु सम्पन्न गरेर महानगरलाई स्मार्ट सिटी अवश्य बनाउने छौँ’ प्रवक्ता भण्डारीले भने ।